I-Sony Xperia Ace: Iinkcukacha, amaxabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Ngokumangalisayo sifumana ifowuni entsha yakwaSony. Inkampani isishiyile nge-Sony Xperia Ace, Esungulwa ngaphakathi kuluhlu oluphakathi, kwaye iyothusa into ezininzi. Kwelinye icala, akukho mntu ubelindele ifowuni entsha kuhlobo, ilinde ukumiliselwa kwesiphelo sayo. Ukongeza, sifumana ifowuni enesikrini esine-intshi ezintlanu.
Iimarike ezikhoyo ngoku ziya zibheja kwizikrini ezinkulu, nakweyiphi na imeko ngaphezulu kweesentimitha ezi-6. Ke ngoko, le Sony Xperia Ace yaphula kunye nale meko, inescreen esincinci kunye noyilo oluhambelana ngakumbi kule fowuni. Okwangoku, ikhutshwa kuphela eJapan ngokusemthethweni.
U-Sony uthengisa kakubiNjengoko ifundwe kutshanje, kwaye izakuyeka ukuthengisa iifowuni kwezinye iimarike njenge-latin america. Le Sony Xperia Ace iboniswa njenge isimanga esivela kuhlobo, Kunye nokubuyela kwisitayile sayo esingokwesithethe, ngeendlela ezininzi. Ngaba baya kuba nethamsanqa ngale modeli?
1 Ukucaciswa kweSony Xperia Ace
Ukucaciswa kweSony Xperia Ace
Uyilo lwefowuni alubonakalisi mininzi imimangaliso. Iscreen esincinci, kunye ne-bezels ephezulu kunye nezantsi. Ngasemva ikhamera enye kwimodeli. Ilula, kodwa iyahambelana phakathi kuluhlu oluphakathi. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo, kutyhilwe yinkampani esele:
Isikrini:I-5-intshi ye-LCD enesisombululo se-FullHD + kwi-2.160 x 1.080 kunye ne-18: 9 ratio
Inkqubo: Qualcomm Snapdragon 630
Ukugcina: I-64GB (yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB nge-MicroSD)
Iikhamera zangasemva: MP engama-12 ene-f / 1.8 ukuvula
Ikhamera yangaphambiliI-8 MP
ConectividadI-USB-C, iBluetooth 5.0, iGual GPS, i-headphone jack, i-WiFi 802.11, i-GLONASS
Abanye: Icala lokufunda ngeminwe, IPX5 / IPX8 ukhuseleko
Ibhetri: I-2.700 mAh ngeNtlawulo ekhawulezileyo ye-4.0 ekhawulezileyo.
UbukhuluUbukhulu: 140 x 67 x 9,3 mm
U bunzima: Iigram ezili-154
Ifowuni ifika njengemodeli esebenza kakuhle phakathi kuluhlu oluphakathi. Nangona ingabonakali naziphi na izimanga ngokweenkcukacha. Ngokuqinisekileyo Yintoni egqithisile, ukubuyela kwi-18: 9 screen ratio, eyinto i-brand eyishiyileyo kunye nesiphelo sayo esiphakamileyo esiboniswe kwi-MWC, apho yazisa khona i-21: 9 ratio, emangalisa wonke umntu. Inzwa yeminwe yeminwe ikule meko kwicala lale Sony Xperia Ace. Ngelixa kungekho nto ikhankanyiweyo malunga nokuvula ubuso kwisixhobo.
Ubungakanani obuncinci befowuni buthetha ukuba ibhetri yayo inobungakanani obuncinci, ukusukela oko Sifumana umthamo we-2.700 mAh. Isenokungabi yindawo efanelekileyo kubasebenzisi abaninzi, abacinga ukuba le fowuni ayizukuhambisa malunga noku. Ibhetri iza nokutshajisa okukhawulezileyo, ngokuqinisekileyo eli liyindawo elithandayo. Kwiikhamera, le Sony Xperia Ace inezinto ezimbalwa ezimangazayo, inesenzi esinye kuphela kwicala ngalinye. Nangona le ayisiyonto imbi, kuba iifowuni zorhwebo ziyaziwa kwiimeko ezininzi zokusebenzisa iikhamera ezilungileyo. Ke kufanelekile ukuthobela kakuhle.
Le Sony Xperia Ace isungulwe ngokusemthethweni eJapan, kwindibaniselwano enye ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi, njengoko sele sibonile. Okwangoku akukho datha kulwaziso olunokubakho kwezinye iimarike. Kuya kufuneka silinde inkampani ngokwayo ukuba isinike ulwazi oluthe kratya malunga noku. Isenokungafiki okanye ngaphezulu kunokwaziwa kungekudala.
Ekusungulweni kwayo eJapan, ifowuni iza ngemibala emininzi: emnyama, emfusa kunye nomhlophe. Ikhutshwa ngohlobo olunye lwe-4/64 GB, ekumiliselweni kwayo kwilizwe laseAsia iya kubiza i-395 euro ukutshintsha. Ke kunokwenzeka ukuba ukuba le Sony Xperia Ace isungulwe ngokusesikweni eYurophu kungekudala, ixabiso layo liya kuba phezulu kakhulu. Siyathemba ukuba siza kwazi kungekudala. Ngaba le fowuni intsha ishiya uphawu lwaseJapan?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Sony Xperia Ace: Ukubuyela kwiifowuni ezi-5 intshi
UCristhian Echeverry sitsho
Andiqondi ukuba kutheni le nto iqhubeka nokunyanzelisa izakhelo ezinkulu kangaka.
Phendula kwiCristhian Echeverry